>မိမိပြည်သူလူထုနဲ.စစ်ကြေညာထားတဲ့ကဒါဖီးနှင့်ငမိုက်သားအာဏာရှင်အုပ်စုကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမနက်ဖန်အရေးပေါ်ဆွေးနွေးမည် | Ethnic Nationalities' Voice: Struggling Voices for Justice
တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	>မိမိပြည်သူလူထုနဲ.စစ်ကြေညာထားတဲ့ကဒါဖီးနှင့်ငမိုက်သားအာဏာရှင်အုပ်စုကိုကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီမှာမနက်ဖန်အရေးပေါ်ဆွေးနွေးမည်	February 22, 2011
သူ.ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်သမားအုပ်စုလို.သတ်မှတ်တယ်၊ပြီးတော့၊ပြည်ပလှုံ.ဆော်မှုကြောင့်ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်တယ်လို.သူ.စစ်တပ်ကိုဝါဒဖြန်.ထားတယ်၊ထို.ကြောင့်၊စစ်တပ်ကသံချပ်ကားအပါအဝင်စစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ပြည်သူလူထုကိုဗုံကြဲပစ်သတ်မှုလုပ်နေသည်၊ပြည်သူပေါင်း ၂၄၀ ကျော်သေဆုံးသွားပြီးပြီ၊လမ်းပေါ်မှာသွေးများစွန်းနေဆဲပါ၊သေဆုံးသည့်ပြည်သူအထဲမှာသံအမတ်မိသားစုများပါဝင် သည်၊
ဆန္ဒပြပြည်သူများအထဲမှာပညာတတ်လူတန်းစားသံအမတ်မိသားစုနှင့်ပတ်သက်တဲ့သူများပါဝင်နေတယ်၊ပစ်သတ်ခံသေဆုံးသည့်အထဲမှာလည်ဘင်္ဂလာဒျေ.သံအမတ်မိသားစုများပါဝင်သည်၊ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာလစ်ဗျားဒုသံအမတ်ကကုလလုံခြုံရေးကောင်စီမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးခေါ်ပေးဖို.တောင်းဆိုရာမှာကုလဆိုင်ရာလက်ရှိလစ်ဗျားလစ်ဗျားကိုယ်စားလှယ်များကထာက်ခံသည်၊Ibrahim Dabbashi’၏အဆိုကိုထောက်ခံတဲ့အနေနဲ.ကဒါဖီး၏အနှစ် ၄၀ အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်၇န်နှင့်နိုင်ငံတကာများဝင်ရောင်စွက်ဖက်ပေး ၇န်တောင်းဆိုသည်၊အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလာဒျေ်၊၊တရုတ်၊အာရပ်နိုင်ငံအဖွဲ.ချုပ်နိုင်ငံများမှလစ်ဗျားသံအမတ်များနှုတ်ထွက်ကြပါပြီ၊အမေရိကန်ရှိလစ်ဗျားသံအမတ်က သူအနေနဲ.ကောင်းသောအစိုးရဘက်မှာသာသူရှိနေပြီးလူသတ်တဲ့အစိုးရဘက်မှာသူမပါသောကြောင့်သူနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး၊သို.သော်ကဒါဖီးချက်ချင်းနှုတ်ထွက်ဖို.တောင်းဆိုသည်၊လူသတ်တဲ့အစိုးရကိုကျနော်ဘယ်လို.မှထောက်ခံလို.မရဘူး၊ကျနော်မျက်စိရှေ.မှာမြင်းတဲအတိုင်းဆိုလုံးဝလက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါ၊ကုလဆိုင်ရာလစ်ဗျားဒုသံအမတ်ကလည်းသူနှုတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူး၊သူကအာဏာရှင်ကိုဝန်ထမ်းလုပ်ဖို.မဟုတ်ဘူး၊လစ်ဗျားပြည်သူကိုဝန်ထမ်းလုပ်နေတာပါလို.ပြောနေပါသတဲ့၊ကဒါဖီးလုပ်ရပ်ဟာလစ်ဗျားပြည်သူကိုစစ်ရေးကြေညာတာပဲ၊လစ်ဗျားပြည်သူကိုကဒါဖီးကလူမျိုးတုံသတ်ဖြတ်နေတာပဲလို.သတင်းထောက်တွေကိုသူပြောခဲ့တယ်၊တရုတ်ပြည်ဆိုင်ရာလစ်ဗျားသံအမတ်ကကဒါဖီကိုစကားပြောရာမှာ ကစားပွဲကပြီးသွားပြီ၊ခင်ဗျားနှုတ်ထွက်ပါ၊ခင်ဗျားအေစ္စရေကိုသွားပါ၊ခင်ဗျားပြည်သူကအာရပ်မဟုတ်ဘူး၊မလေရှားရှိလစ်ဗျားသံရုံကကဒါဖီးကို ဘာဘာရား ယမမင်းလူသတ်သမားလို.ခေါ်ဝေါသုံးစွဲပြီးကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြည်သည်၊ကုလဆိုင်ရာဒုသံအမတ်ဒက်ဘရှီးက နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံကိုကဒါဖီကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လူသားအပေါ်ရာဇာဝတ်မှုကိုစစ်ဆေးပေးဖို.နှင့်သူ ၄၂ နှစ်ကြာအာဏာရှင်ဆန်းဆန်းအုပ်ချုပ်မှုကာလတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုများကိုပါစစ်ဆေးပေးဖို.တောင်းဆိုသည်၊ထို.အပြင်၊အကယ်၍ကဒါဖီးထွက်ပြေးမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာအနေနဲလက်မခံဖို.၊သူငွေကြေးလွှဲပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းကြီးကြပ်စောင့်ကြည့်ပေးဖို.တောင်းဆိုထားသည်၊At the U.N., Dabbashi urged the international community to establish safe passage for medical supplies from neighboring Tunisia and Egypt to get across the borders to Benghazi, Libya’s second-largest city, which protesters claimed to control after heavy fighting.
“We also call on the prosecutor of the International Criminal Court to investigate the crimes against humanity committed by Gadhafi against the Libyan people,” Dabbashi told the Associated Press.
Dabbashi said Gadhafi needed to be brought before the court to answer not only for “the genocide he is committing now” but also for “all the other crimes he has committed during the 42 years in power.” ဗမာစစ်အစိုးရသံအမတ်နဲ.လစ်ဗျားသံအမတ်များတူနေသလား?
ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကမနက်ဖန်မနက်ပိုင်းမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးထိုင်မည်၊ဘန်ကီမွန်ကလည်းကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ.ဒီကိစ္စကိုအရေးပေါ်ဆောင်ရွက်မည်လို.မျှော်လင့်သည့်အကြောင်း၊ဘန်နဲ.ကဒါဖီး မိနစ် (၄၀)ကြားဖုန်ဆက်စကားပြောတဲ့အခါကလည်းပြည်သူအပေါ်အကြမ်းဖက်ကိုင်တွယ်မှုချက်ချင်း၇ပ်တန်.ပေးဖို.နှင့်အရေးကြီးတဲ့လူ.အခွင့်အရေးကိုလေစားဖိုပြောကြားခဲ့သည်၊လစ်ဗျားစစ်ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ပြည်သူတွေကိုဗုံကြဲသတ်ဖြတ်မှုတားဆီးနိုင်အောင်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ. No -Fly Zone တောင်းဆိုချင်ရင်လည်းသူတို.သဘောပဲလို.ဘန်ကြီးကဆိုပါ၏၊
လူ.အခွင့်အရေးအဖွဲ.ပေါင်း ၇၀ စုပေါင်းပြီး လူသားအပေါ်ရာဇာဝတ်ကျူးလွန်တာကိုcrimes against humanityစစ်ဆေးပေးဖို.၊လူ.အခွင့်အရေးကောင်စီမှာလစ်ဗျားအစိုးရကိုအဖွဲ.ဝင်ကနေရပ်ဆဲထားဖို.တောင်းဆိုထားသည်၊
Articles, သတင်း။ News